खुशीको खबर – सरकारले होटल व्यवसाय खोल्ने मिति तोक्यो ! यो मितिबाट खुल्दैछन होटलहरु – – Life Nepali
खुशीको खबर – सरकारले होटल व्यवसाय खोल्ने मिति तोक्यो ! यो मितिबाट खुल्दैछन होटलहरु –
५ साउन, काठमाडौं । पाँच महिनादेखि बन्द रहेको आन्तरिक तथा बाहृय उडान भदौ १ गतेबाट सुरु हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकमा हवाई उडान पुनः सुचारु गर्ने निर्णय गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले चैत ५ गतेबाट अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरेको थियो भने ११ गतेबाट आन्तरिक रोकिएको थियो । जेठ २६ बाट सरकारले लकडाउन केही खुकुलो गरिएको भए पनि हवाई सेवा सुचारू भएको थिएन । पछिल्लो समय विदेशबाट नेपाल फर्किने नागरिकहरूका लागि चार्टर फ्लाइटहरू भने भइरहेको छ ।
अब अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई आउन दिन पनि हवाई सेवा सुचारू गर्ने निर्णय भएको मन्त्री भट्टराईले बताए त्यसका लागि हवाई उडानसम्बन्धी प्रोटेकल मन्त्रालयले बनाउनेछ । स्रोतका अनुसार हवाई उडान सुरु गर्नुअघि होटल व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न दिने सरकारको तयारी छ । एक मन्त्रीले भनेका छन्, ‘साउन १५ गतेबाट होटलहरु पनि खुला गर्ने कुराकानी भएको छ ।’
Previous खुसिको खबर : हवाइ यातायात सुचारु गर्ने मिति तोकियो ! यो मितिबाट सुचारु हुनेछ हवाइ यातायात –
Next कोरोनाको खोपलाइ लिएर अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी बाट आयो यस्तो खुसिको खबर-
48 mins ago Life Nepali